Jordi Sierra i Fabra: mabhuku atinokurudzira kuti uverenge | Zvazvino Zvinyorwa
Jordi Sierra i Fabra: mabhuku atinokurudzira
Encarni Arcoya | | Vanyori
Pasina kupokana, mumwe wevanyori vane mukurumbira uye vanoshanda veSpanish ndiJordi Sierra i Fabra, uyo akanyora anopfuura anopfuura mazana mashanu mabasa kubvira achiri mudiki kwazvo. Muchokwadi, kune mabhuku naJordi Sierra i Fabra ezvese zvavanofarira, uye mazhinji acho anoshandiswa muzvikoro kana kumatangi ekuita basa rekunyora kana kutaura
Asi, Jordi Sierra i Fabra ndiani? Ndeapi mabhuku awakanyora? Sei ichizivikanwa zvakadaro? Isu tinopindura iyo yese mibvunzo pazasi.
1 Ndiani Jordi Sierra i Fabra
2 Jordi Sierra i Fabra: mabhuku ake
2.1 Strawberry minda
2.2 Kupondwa kwemudzidzisi wemasvomhu
2.3 Jordi Sierra i Fabra mabhuku: Kafka uye chidhori chinofamba
2.4 Yangu (yekutanga) mazana mana emabhuku: zvinyorwa zvinyorwa zveJordi Sierra i Fabra
2.5 Jordi Sierra i Fabra mabhuku: Raibhurari yemabhuku asina chinhu
2.6 Jordi Sierra i Fabra mabhuku: Ganda rekurangarira
Ndiani Jordi Sierra i Fabra
Jordi Sierra i Fabra munyori akazvitsaurira wechiSpanish. Iye akazvarwa mu1947 muBarcelona uye akanyora akasiyana zvinyorwa zvemhando, senge zvinyorwa, nhetembo, zvinyorwa kana nyaya pfupi. Nekudaro, zviri mumabhuku evana nevechidiki kwaakawana kubudirira kwake kukuru.
Chimwe chinhu chisingazivikanwe nevazhinji nezvemunyori ndechekuti anofarirawo mimhanzi yepop, kusvika padanho rekuti aishandira magazini uye nhepfenyuro pane iwo musoro wenyaya. Ehe, akaisanganisa zvakakwana nebasa rake semunyori.
Nhasi Jordi Sierra i Fabra anozivikanwa kwete chete kuSpain, asiwo muLatin America. Uye hupenyu hwake hwave husina "rosy" kutaura.
Munyori aive nematambudziko mazhinji achiri mudiki nekuti aive wekukakama uye izvi zvaireva kuti vazhinji vevaanodzidza navo vaimunhonga. Izvo zvakafanana zvakaitika mumhuri yake, yakadzvinyirirwa nababa vake chaivo. Naizvozvo, akatendeudzira kutarisa kwake kwese kumabhuku uye aive anomanikidza kuverenga.
Pazera ramakore masere akaita tsaona yakakomba uye kubva pamakore gumi kusvika gumi nemaviri akatanga kunyora nyaya dzake dzekutanga. Vanenge vese zvavo vaizivikanwa nekuve neanenge zana zana mapeji, kunyange hazvo pa10 akakwanisa kupedzisa rimwe remapeji mazana mashanu.
Akadzidza kuve rigger nekuda kwebasa rababa vake, zvisinei, chaaifarira kunyora nekuteerera mimhanzi. Pazera ramakore makumi maviri nerimwe, Public Order Court rakamusainira nekuti ainyora mumagazini yakavanzika uye izvo zvakatungamira kubviswa kwepasipoti yake.
Mushure mekumanikidza kwakawanda, akawana basa semupepeti wemagazini muna 1968. Zvisinei, hazvina kugumira ipapo; Akaita nguva yekunyora chinyorwa muLa Prensa de Barcelona neNuevo Diario de Madrid. Akatorawo semutungamiriri muvhiki Disco Exprés (iyo yakagara makore masere) uye bhuku rake rekutanga raive rimwe remimhanzi, muna 8. Raive rinenge ra1972-1962 Nhoroondo yePop Music.
Aizivikanwa kwazvo muindastiri yemimhanzi zvekuti mamwe emimhanzi magazini emhando yepamusoro aive naye kuchikwata chavo: Magazini yepamusoro, Yakawedzerwa, Yakakurumbira 1, Super Pop ...
Kunze kwebhuku iri (uye nemamwe akawanda akauya), munhoroondo nemutsara akatanga neThe World of Golden Rats, muna 1975; nepo zvinyorwa zvevechidiki zvaisazosvika kusvika 1981 neEl cazador.
Jordi Sierra i Fabra: mabhuku ake
Kutaura newe zvinotevera pamusoro pemabhuku ese akanyorwa naJordi Sierra i Fabra raigona kunge riri basa risingabviri. Uye ndezvekuti kuchikwereti chake ndiye munyori wemabhuku anodarika mazana mashanu, ayo atakatadza, kunyangwe dai taida, kupindura pane rimwe nerimwe rawo nekuda kwekabhuku kadiki.
Nekudaro, isu tinogona kuita a kusarudzwa kwezvatinofunga kuti ndiwo mabhuku akanakisa emunyori. Ehezve, neakawanda kudaro, hazvigoneke kufukidza ese kana kunyangwe kuita sarudzo yakasarudzika, sezvo vamwe vachidaro kana mamwe mabhuku. Asi kwatiri, isu takasarudza zvinotevera:
Luciana mukadzi wechidiki kubva kuma90s uyo akazadzwa nenyika yezvinodhaka, kudzamara awira mukoma. Nekudaro, izvo zvinoedzwa nemunyori nebasa nderekubatsira vechidiki kuti nzwisisa zvakanaka nezvisina, zvakanaka nezvakaipa munharaunda.
Kupondwa kwemudzidzisi wemasvomhu
Ndiani aisazoda kuuraya mathematics mudzidzisi wake imwe nguva? Kunyangwe Jordi Sierra i Fabra mumabhuku ake asingatsvage kupa mazano ekuita zvakaipa, tinogona kuwana inonakidza nyaya.
Mariri uchasangana nevadzidzi vatatu vakaipa pamasvomhu. Saka mudzidzisi anoedza kuvapa ivo nemamiriro ezvinhu mavanonyatsoda kufarira kugadzirisa: kufa.
Nechikonzero ichi, anomutsa kufa kwake uye kuraira, kuburikidza nezvinyorwa uye zvinongedzo, kugadziriswa kwenyaya iyi.
Jordi Sierra i Fabra mabhuku: Kafka uye chidhori chinofamba
Mune ino kesi munyori akashandisa fungidziro yake kugadzira mutero mukuru kumunyori Kafka. Uye nekuda kweizvi akagadzira iyi nyaya, mairi inotaurwa nezvekuti Kafka akasvika sei kumusikana aichema mupaki. Ikoko, akamubvunza zvainge zvaitika kwaari uye musikana mudiki akamuudza kuti aive arasikirwa nechidhori.
Kukurudzirwa nemusikana iyeye, Akafunga kuumbiridza hunhu hwa "The Doll Postman", murume wechidiki aive mupaki uye aifanira kuendesa meseji kubva kuna "chidhori" chake.
Nekudaro, Jordi Sierra i Fabra mubhuku rake akadzokorora chiitiko pamwe ne "tsamba" dzakanyorwa.
Ehe, isu tinofanirwa kuziva kuti ichi hachisi chinhu chakanyatsoitika (kunze kwechiitiko nemusikana, nezve izvo zvakataurwa nechirikadzi yake).
Yangu (yekutanga) mazana mana emabhuku: zvinyorwa zvinyorwa zveJordi Sierra i Fabra
Munyori akaronga mubhuku iri mazita emabhuku ake ekutanga, zvikonzero zvakamutungamira kuti azvinyora, pamwe neiyo Anecdotes iwe yaunorangarira kubva kune iwo ekutanga makore
Jordi Sierra i Fabra mabhuku: Raibhurari yemabhuku asina chinhu
Iwe unogona here kufungidzira kuti muraibhurari tsamba dzemabhuku dzakatanga kudonha? Nekuti, kunge chirimwa chinosvava, mabhuku anotanga kufa? Zvakanaka ndizvo zvinofungidzirwa naJordi Sierra i Fabra nebhuku iri, taundi risina munhu anoverenga uye zvisinganzwisisike zviitiko zvinotanga kuitika. Asi zvishoma nezvishoma ivo vanozoona chimwe chinhu chakanyanya kukosha.
Jordi Sierra i Fabra mabhuku: Ganda rekurangarira
Uyu mutambo umo iye anotizivisa isu kune wechidiki mu Africa protagonist akarasikirwa naamai vake. Nekudaro, baba vake havagare naye, asi vanofunga kumutengesa kuti vagadzirise matambudziko emari.
Naizvozvo, mubhuku iwe unogona sangana nematambudziko ayo jaya iri anotambura nekuve muAfrica uye murombo. Nemamwe mameseji anoenda zvakadzika uye anokuita kuti ufunge, izvo zvinotsvaga nemunyori kuita kuti wechidiki anzwisise (nekuti ibhuku rezvinyorwa zvevechidiki) kuti hapana chikonzero chekutonga nerudzi, ganda ganda, nezvimwe. (uye mamwe mameseji atinochengeta kuitira kuti zvisarambe zvakamuka iwe).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Jordi Sierra i Fabra: mabhuku atinokurudzira
inoita 9 mwedzi
Ini ndinoda munyori uyu.Ndakazviwana pandakaverenga EL CARTERO de MUÑECAS, kugadzira rukudzo rukuru kuna KAFKA, ipapo ndakaverenga mamwe emabhuku ake evechidiki, kunyangwe ini ndatova nemakore makumi manomwe neshanu ekuberekwa.
Leticia Sierra. Kubvunzana nemunyori weMhuka
Spanish nhoroondo nhoroondo mabhuku